कोरोना उपचारका लागि नेपालमा पहिलोपटक रगतबाट प्लाज्मा झिक्ने डाक्टर (भिडिओ) :: Setopati
सन्जिब बगाले काठमाडौं, साउन २०
कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका बिरामी उपचारका लागि सहयोगी बन्न सक्ने प्ल्जामा थेरापीको पहिलो प्रयोग नेपालमा सुरू भएको छ।
केही दिनअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक जना संक्रमितलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरू गरिएको हो। उपचारमा संलग्न चिकित्सिकहरूका अनुसार ती बिरामीको स्वास्थ्यमा उल्लेख सुधार भएको छ।
प्लाज्मा थेरापीका लागि प्लाज्मा बनाउने चिकित्सक डाक्टर बिपिन नेपालले अहिले नै यो उपचार विधिलाई सफल\_असफल भएको भन्न नमिल्ने बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै रक्तसञ्चार विशेषज्ञ डाक्टर नेपालले ग्राण्डी इन्टरनेसनल अस्पताल धापासीमा पहिलोपटक रगतबाट प्लाज्मा झिकिएको दाबी गरे।
'कोरोनाको बिरामीका लागि पहिलोपटक प्लाज्मा निकाल्न सुरू भएको हो। यसको प्रोटोकल हुन्छ। कस्तो बिरामीको लागि प्लाज्मा दिन सकिन्छ भनेर हामीले दुई महिनादेखि प्रोटोकल बनाएका थियौं,' डाक्टर नेपालले भने, 'अहिले धेरैले चासो देखाएका छन्। सरकारले पनि १२ वटा अस्पताललाई तोकेको छ। पहिलो नै गाह्रो हो, यो अब व्यापक रूपमा सुरू हुन्छ।'
आफू प्लाज्मा थेरापीको प्रोटोकल बनाउने टिममा रहेको र यसका लागि दुई महिनादेखि प्रयास भएको भन्दै उनले नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल (एनएचआरसी) को आग्रहमा बनाइएको बताए।
एनएचआरसीले आग्रह गरेको दुई घन्टामै प्लाज्मा निकालिएको समेत उनले बताए।
प्लाज्मा थेरापी भनेको के हो? कोरोनाभाइरसका बिरामीलाई यो किन महत्वपूर्ण छ? कस्ता बिरामीलाई यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ? लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले ग्राण्डी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर नेपालसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
- रगत तीनवटा तत्वले बनेको हुन्छ- रातो रक्तकोषिका, सेतो रक्तकोषिका र प्लेटलेट्स। ती सबै तत्व तैरिएर हिँड्ने माध्यमलाई प्लाज्मा भनिन्छ। प्लाज्माले शरीरमा प्रोटिन पुर्‍याउने, रोगसँग लड्ने क्षमतालाई शरीरको विभिन्न भागसम्म पुर्‍याउने काम गर्छ। यही प्लाज्माको भाग बिरामीलाई दिनु नै प्लाज्मा थेरापी हो।
- कोरोना लागेर निको भएका व्यक्तिमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता (एन्टिबडी) निर्माण भएको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको प्लाज्मा झिकेर कोरोना लागेको बिरामीलाई दिन सकिन्छ। एन्टिबडी प्लाज्मामा हुन्छ। श्वास फेर्न गाह्रो भएको अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई एन्टिबडी दिए रोग प्रतिरोधी क्षमता जगाउँछ भन्नेछ।
- यो सतप्रतिशत सफल होइन। यो अनुसन्धानका लागि प्रयोग भइरहेको छ तर प्रमाणित भइसकेको छैन।
- स्पेनिस फ्लू र इबोलामा पनि यस्तै प्रयोग भएकाले अहिले पनि काम गरिएको हो। यसले यति प्रतिशत निको हुन्छ भन्ने अनुसन्धनात्मक तथ्यांक आइसकेको छैन।
- भारतमा यसको प्रयोग राम्रो देखिएन। तर चीनमा सफल देखिएको थियो। अहिले नेपालमा एक जनालाई मात्रै परीक्षण गरिएको हो। सयौं, हजारौंमा गरेपछि मात्रै यसको प्रभाव थाहा हुन्छ।
अब १२ अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको 'प्लाज्मा थेरापी' बाट उपचार